China I-laser ye-diode ethe nkqo idibanisa yag laser ipl shr elight rf imisebenzi emininzi yomatshini kunye nabavelisi |KEYLASER
Umzi-mveliso ovunyiweyo wase China Ce uVunyiweyo uMgangatho 7...
Ixabiso leWholesale yaseChina Professional 600W 755/810/1064...
Ixabiso elisezantsi iChina Portable 808nm Professional Sopra...
Ubude beWaveleng kathathu 755 810 1064 iLaser yeDiode esisigxina...
Ukususwa kweenwele ezine ze-laser diode ezine-sysyem
KPL IPL SHR Ukususwa kweNwele zesafire yesafire ngesandla ...
Velashape 3 Vacuum Roller Slimming Machine esetyenziselwa ...
I-laser diode ethe nkqo idibanisa yag laser ipl shr elight rf umatshini wemisebenzi emininzi
Amandla e-laser diode angena kumaleko angaphezulu kwesikhumba kwaye adlulisele amandla ayo ezinweleni.Amandla afunxwa yi-melanin ekhoyo kwiinwele kwaye aguqulelwe kubushushu, onakalise kwaye ekugqibeleni atshabalalise i-follicle yeenwele, ngaphandle kokonakalisa izicubu ezijikelezileyo ukunqanda ngokusisigxina ukukhula kweenwele.
Itekhnoloji ye-Laser ye-ND YAG iphucule kakhulu ukukwazi ukunyanga izilonda ze-melanocytic kunye neetattoos kunye nepulsed ngokukhawuleza.
Q-switch neodymium: yttrium aluminiyam garnet (Nd: YAG) laser.
Ukunyangwa kwe-laser yezilonda ze-pigmented kunye ne-tattoos zisekelwe kumgaqo okhethiweyo we-photothermolysis.I-QS laser Systems inako
ngempumelelo ukukhanyisa okanye ukuphelisa iintlobo ezahlukeneyo zezilonda ze-epidermal kunye ne-dermal pigmented kunye ne-tattoos kunye nomngcipheko omncinci.
Ubungakanani bendawo 12*12mm/12*16nm
Ubude bamaza IDiode 808nm/755nm+808nm+1064nm
Ukuxinana kwamandla I-Diode 1-100J / cm2
Imveliso yeLaser 1000W
Izinga lokuphindaphinda 1-10HZ
Ububanzi be-Pulse 6ns
Ukupholisa uqhagamshelwano lwesafire -5-5℃
Sebenzisa ujongano 10'' Umbala wesikrini esichukumisayo wenyani
Ubungakanani 60*52*132cm (L*W*H)
Amandla omatshini 3500W
Inkqubo yokupholisa Isiguquli somoya sokupholisa+semiconductor+moya+amanzi
I-1. I-90% ye-spare parts of handpiece imvelaphi isuka eJamani, e-USA naseJapan, iqinisekisa ukusebenza okuzinzile komatshini, iziphumo ezimangalisayo kunye nokusebenza ixesha elide.
2. inkqubo yokupholisa egqibeleleyo--- ICompressor yenza ukupholisa, iiyure ezingama-36 zisebenza ngaphandle kokuyeka.abathengi baziva bekhululekile kwaye bengenabuhlungu ngexesha lonyango lonke.
3. imenyu yonyango elula kwaye enobuhlobo, kunye nenkqubo yokukhusela i-alarm ye-auto yokuhamba kwamanzi, inqanaba lamanzi kunye nobushushu bamanzi kwimenyu, ukuphepha nayiphi na ingozi ngexesha lokuqala.
4. Unyango olungasebenzisiyo.
Iphakheji Ibhokisi yenqwelomoya esemgangathweni
Ukuhanjiswa Kwiintsuku zokusebenza ezi-2-3
Ukuthunyelwa ngenqanawa Umnyango ukuya emnyango(DHL/TNT/UPS/FEDEX/EMS…), Ngomoya, Ngolwandle
Njengomvelisi oyingcali, sibonelela ngeenkonzo ezilandelayo:
1. Inkonzo yomnyango ngendlu ngomoya: DHL, UPS, TNT, Fedex…ngokuhanjiswa ngokukhawuleza.
2. Iwaranti yonyaka we-1, ukugcinwa kwexesha lokuphila.
3. Uqeqesho: (Ividiyo + Manual + Inkonzo ye-Intanethi) inokukugcina uSebenzisa ngokuLula.
4. Isikhokelo sobuchwephesha: Iinjineli kunye neqela lasemva kokuthengisa kwiiyure ezingama-24 ngenkonzo yobuchwephesha kwi-Intanethi.
5. Inkonzo ye-OEM & ODM yabathengisi.
Yasekwa kwi-2007, i-KEYLASER SCI-TECH Co., Ltd., umenzi wezixhobo zonyango emhlabeni jikelele uvelisa iimveliso eziphezulu zoogqirha beplastiki, i-dermatologist, oogqirha kunye nabaqeqeshi bezempilo.
Ngomgca wemveliso othembekileyo obandakanya i-IPL, i-RF microneedle, i-CO2, i-Diode laser, kunye ne-Q-Switch laser, i-KEYLASER ikhonza ishishini njengenye yeenkampani ezikhokelayo ezinezinga elibukhali le-R&D kunye namava axabisekileyo.
I-KEYLASER iphuhlisa eyona mveliso inenkqubela phambili yokukhokela imarike yehlabathi kwaye iimveliso zithengiswa kwihlabathi liphela ziiofisi zaphesheya, i-KEYLASER isebenzisana namaqabane osasazo ehlabathi ukubonelela ngolwaneliseko oluphezulu lwabathengi.
Ngaphambili: Ephathwayo 755+808+1064nm diode laser+IPL ukususwa iinwele +YAG ukususwa umvambo
Okulandelayo: Umatshini weCryolipolysis onciphisa amanqatha okuQinisekisa umsebenzi onezandla ezine ngaxeshanye